> Resource> Flash Drive> Olee naghachi Data mgbe USB Format Error
Biko nyere m aka Naghachi Data mgbe USB Format Error!
Na nso nso mgbe m plugged m USB flash mbanye n'ime m USB n'ọdụ ụgbọ mmiri kọmputa m gwara m na m kwesịrị usoro ya. Mgbe m chọrọ usoro ya, ọ sịrị na m na-apụghị usoro ya. M gbalịrị ya na 3 dị iche iche kọmputa ma m ka na ike ịnweta ya. Nke a flash mbanye nwere niile m coursework maka Monday. Biko nyere m aka! M mkpa iji nweta ọrụ m azụ.
Jiri ya nwayọọ. O yiri gị flash mbanye na-emerụ. Ọ bụrụ na gị flash mbanye adịghị ọbụna egosipụta na disk management m, m egwu mbanye na-agbajikwa na ị nwere ike agaghịkwa weghachite data na ya. Ma ọ bụrụ na gị flash mbanye gosiri na window na ị dị nnọọ ike na-emeghe ya, ị ga-kechioma gbapụta gị data. N'ihi na faịlụ niile ka bụ ndị na gị flash mbanye na ha ga-enwe mgbe nile n'ebe ahụ dị ka ogologo oge dị ka mba ọhụrụ data na gị USB mbanye na-edochi ha.
E nwere ọtụtụ mgbake omume na Internet n'ihi na ị na-agbake data mgbe USB format njehie. Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ ike kacha ike onye na i nwere ike inwe idozi USB format njehie. Ọ na-enyere gị aka naghachi niile formats nke faịlụ site na USB flash mbanye na format njehie 3 mfe nzọụkwụ, gụnyere photos, videos, music faịlụ, akwụkwọ, wdg Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na USB flash mbanye, USB mkpisi, kaadị ebe nchekwa, wdg
Ị nwere ike nweta a ikpe mbipute idozi USB format njehie ugbu a.
Naghachi Data mgbe USB Format Error na 3 Nzọụkwụ
Cheta na: Biko adịghị agbalị Ọkpụkpọ USB mbanye mgbe njehie a na-eme, n'ihi na ihe nwere ike kpam kpam rụrụ arụ gị mbanye na gị data nwere ike agaghịkwa-eweghachi.
Aga m na-egosi gị otú ị ịrụ USB format njehie data mgbake na Wondershare Data Recovery maka Windows. Ọ nwere yiri ọrụ na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode idozi USB format njehie
Ná mmalite, mgbe ị wụnye na ẹkedori omume na kọmputa gị, ị ga-nyere na 3 mgbake ụdịdị: "Echefuola File Iweghachite", "nkebi Iweghachite" na "Raw File Iweghachite".
Naghachi data mgbe USB format njehie, ka họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode mbụ.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị USB flash mbanye
Na nke a nzọụkwụ, gị USB flash mbanye ga-emere ka a mbanye na window. Ị nwere ike họrọ ya na pịa "Malite" ka usoro ihe omume Doppler faịlụ na ya.
Nzọụkwụ 3 Naghachi data mgbe USB format njehie
Mgbe scanning, faịlụ gị format njehie USB mbanye ga-egosipụta na "Ụzọ" na "File Pịnye" edemede.
Ị nwere ike ele mbụ faịlụ aha ma ọ bụ preview oyiyi na-ego otú ọtụtụ faịlụ nwere ike natara site gị format njehie USB mbanye.
Mgbe ahụ, ị ​​na mkpa iji akara faịlụ na ị chọrọ na pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Cheta na: Biko adịghị na-data azụ gị format njehie USB mbanye zere data overwritten.